Bibikely | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Voangory voapoizina: fomba fitsaboana enti-manimba
Voatendry ho iray amin'ireo bibikely mampidi-doza mampidi-doza indrindra mahatonga ny fahasimbana amin'ny karazan-tsaka samihafa ny voangory. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hahita fanazavana feno momba ny fomba hahafantarana an'io biby fiompy io ianao sy ny fomba hanomezana fepetra mifanohitra amin'izany raha manenjika ny fandrianao ireo bibikely ireo.
Any amin'ny tanàna maoderina, dia tsy misy rambo. Ity zavatra mahafaly ity dia hazavaina amin'ny fisian'ny mikrôvao ao amin'ny trano fisakafoana sy ny Wi-Fi, ary amin'ny famelana ny fampiasana tapakilam-pandriana amin'ny tehina mihena amin'ny rano, sy ny tontolo iainana ary any amin'ny faran'izao tontolo izao, ary antony an'arivony. Na dia izany aza, misy ireo tranga mampikorontan-tsaina. Ary raha amin'ny fotoana tsy dia mahafinaritra dia misy vahiny tsy ampoizina hitanao eo amin'ny latabatra fisakafoana na amin'ny toerana hafa, dia tsy maintsy miala aminy sy ny havany ianao amin'ny fotoana fohy.
Voangory fanafody: ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fitsaboana amin'ny homamiadana
Ny fomba fitsaboana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy mitsahatra mahagaga. Efa tonga any zhukoglovaniya izao, ary amin'ny endrika velona. Miresaka momba ilay dokotera mpanamboninahitra voako, na ny tononkalo maizimaizina, izay, araka ny fanasitranana amin'ny vahoaka, dia afaka miady amin'ny aretina mahatsiravina toy ny homamiadana sy ny SIDA. Famaritana biolojika Ao amin'ny bika aman'endrika - sombin-damba mainty kely fotsiny raha 5 metatra fotsiny.
Ireo tsy ampy saina ao amin'ny trano iray: avy aiza izy ireo sy ny fomba hiatrehana azy ireo
Izay nahita karipetra hazo iray dia hanamafy fa ity zavaboary ity dia tsy miteraka fihetseham-po tsara. Tsy hita ao amin'ny ravinkazo matevina ao amin'ny fonon'ny fianjerana na maitso, fa ao amin'ny trano na trano ihany koa. Hiresaka momba ity biby ity izahay sy ny fomba handroahana azy ao an-tranonareo. Famaritana Mokritsa, izay mifanohitra amin'ny finoan'ny vahoaka, dia tsy bibikely.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Bibikely